Xildhibaan Australian ah oo xil looga qaaday wax uu ka sheegay Shiinaha - BBC News Somali
Xildhibaan Australian ah oo xil looga qaaday wax uu ka sheegay Shiinaha
30 Nofembar 2017
Image caption Sam Dastyari ayaa sheegay in ay layaab ku noqotay markuu maqlay codkaas horay looga duubay
Xildhibaan Australian ah ayaa laga qaaday xil sare oo uu hayay ka dib markii la soo bandhigay cod laga duubay oo caddaynaya in uu baalmaray siyaasaddii xisbigiisa ee ku wajahnayd Koonfurta Badda Shiinaha.
Sam Dastyari ayaa Khamiistan banneeyay xilkii sare ee uu ka hayay xisbiga mucaaradka ah ee Shaqaalaha.
Codka laga duubay oo maqal ah ayaa sifaahfaahsan u sheegaya sida uu u taageersan yahay meesha uu Shiinuhu ka taagan yahay Badda Koonfurta Shiinaha, codkaasna waxaa laga duubay shir jaraa'id oo uu qabtay sannadkii hore.
Dastyari ayaan horraan wax wayn uga soo qaadadin mar su'aal laga waydiiyay.
Codkan oo ay baahiyeen warbaahinta Australia ayaa la maqli karaa Dastyari oo leh, Australia ma ahan in ay gacmaha la gasho "taariikh kumannaan sano soo jirtay".
"Ka run sheegidda xadka Shiinaha" waa arrin Shiinaha u taalla," ayuu yiri.
Rag loo maxkamadaynayo in ay weerareen masaajid Australia ku yaalla
Macluumaadka difaaca Australia oo "la xaday"
Ra'iisulwasaare ku xigeenka Australia oo xilka laga xayuubiyay
'Dhaqtar Isku sheeg' 11 sano ka shaqeysanayay Australia
Hogaamiyaha xisbiga Shaqaalaha ee Australia Bill Shorten ayaa sheegay in hadalka uu horay u sheegay Dastyari uu marin habaabin ahaa. Xisbiguna uu taageersan yahay xukunka maxkamadda caalamiga ah ee murannada kaas oo liddi ku ah sheegashada Shiinaha ee Badda Koonfurta Shiinaha.